Ọdịiche dị n'etiti mkpuchi mkpuchi na mkpuchi anya
Ihe mkpuchi mkpuchi na -ejikarị mwepụ ọkụ na -emetụta argon (Na) ion n'elu ebe a chọrọ.
A na -achụpụ atọm nke ihe elekwasịrị anya wee na -agbakọta n'elu mkpụrụ ahụ iji mepụta ihe nkiri dị gịrịgịrị.Ihe Njirimara na ịdị n'otu nke ihe nkiri a na -agbasasị dị mma karịa nke ihe nkiri ahụ gbawara., mana ọsọ mkpuchi ahụ ji nwayọ nwayọ karịa nke ihe nkiri vaporized..Fọrọ nke nta ka akụrụngwa ọgbara ọhụrụ niile na -eji ndọta siri ike na elektrọnị na -agba gburugburu iji mee ka ionization nke argon gbara gburugburu..
Na -eme ka ohere nke nkwekọrịta dị n'etiti ebumnuche na argon ions mụbaa,
Mụbaa ọnụego sputtering. N'ozuzu, Ihe mkpuchi ọla na -ejikarị DC sputtering, na ihe seramiiki na-anaghị arụ ọrụ na-eji sputtering RF AC. Ụkpụrụ bụ isi bụ iji nchapu ọkụ (mwụpụ na -enwu gbaa na oghere).
ihapu) Ihe argon (Na) ion kụrụ ebe a na -atụ anya ya, na cations na plasma ga -eme ngwangwa gaa na electrode na -adịghị mma dị ka ihe na -agbasasị. Mmetụta a ga -eme ka ihe a na -atụ anya na -efepụ wee debe ya na fim dị n'okpuru, ojiji nke sputtering usoro maka film mkpuchi nwere ọtụtụ e ji mara: (1) Ọla, Enwere ike ịme alloy ma ọ bụ insulator ka ọ bụrụ ihe nkiri.(2) N'okpuru ọnọdụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị, enwere ike ịme ihe nkiri dị gịrịgịrị nke otu mejupụtara site na ọtụtụ ebumnuche na mgbagwoju anya.(3) Site n'ịgbakwunye oxygen ma ọ bụ gas ndị ọzọ na -arụ ọrụ na ikuku ikuku, enwere ike ịme ngwakọta ma ọ bụ ngwakọta nke ihe elekwasịrị anya na molecule gas.(4) Enwere ike ịchịkwa ntinye eburu n'uche ugbu a na oge ịgbasa, ọ dịkwa mfe ịnweta ọkpụrụkpụ ihe nkiri dị elu.(5) E jiri ya tụnyere usoro ndị ọzọ, ọ na-aka mma maka imepụta ihe nkiri sinima nke nwere nnukwu mpaghara.(6) Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ike ndọda adịghị emetụta ahụ ahụ, na enwere ike ịhazi ọnọdụ nke ebumnuche na mkpụrụ.(7) Ike nrapado n'etiti mkpụrụ na ihe nkiri karịrị 10 oge nke ihe nkiri mkpuchi vapor izugbe, na n'ihi na ụmụ irighiri akwara na -ebu nnukwu ume, ha ga -aga n'ihu na -ekesa n'elu ihe nkiri na -akpụpụta elu ka ha nweta ihe nkiri siri ike ma sie ike. N'otu oge ahụ, ike dị elu na -eme ka mkpụrụ ahụ dị naanị mkpa kristal kristal nwere ike nweta ya na obere okpomọkụ.(8) Nnukwu njupụta dị elu na ọkwa izizi nke ihe nkiri, nke nwere ike mepụta ihe nkiri na-aga n'ihu nke dị n'okpuru 10nm.(9) Ihe a na -atụ anya nwere ogologo ndụ ma enwere ike mepụta ya na -akpaghị aka ma na -aga n'ihu ogologo oge.(10) Enwere ike ịme ihe elekwasịrị anya n'ụdị dị iche iche, na nhazi pụrụ iche nke igwe maka njikwa ka mma yana nrụpụta kacha arụ ọrụ.
Ngwa anya mkpuchi
1. Eyi na-eguzogide ihe nkiri (dịruru film)
N'agbanyeghị ma ọ bụ ihe eji eme ihe ma ọ bụ ihe eji eme ya, n'iji ụbọchị eme ihe, esemokwu na ájá ma ọ bụ grit (silicon oxide) ga -eme ka oghere na -eyi ma kpụọ n'elu oghere .. Eji ya tụnyere mpempe akwụkwọ iko,
Ike nke ihe ndị sitere n'okike dịtụ ala, ọ na -adịkarị mfe ịchapu site na mikroskopu, anyị nwere ike ịhụ na a na -ekekarị nchapu dị n'elu oghere ụzọ abụọ. Otu bụ nchacha nke grit kpatara, nke na -emighị emi na obere, nke na -adighi mfe onye nwe ya ịchọpụta; nke ọzọ bụ nchacha nke nnukwu ntụpọ kpatara. , Deep na ike ike gburugburu, ịnọ na mpaghara etiti ga -emetụta ọhụụ.
(1) Nka nka
1) Ọgbọ mbụ nke teknụzụ ihe nkiri na-eyi uwe
Ihe nkiri mgbochi a malitere na mbido 1970. N'oge ahụ, ekwenyere na anya m iko anaghị adị mfe igwu ihe n'ihi ike ha siri ike, ebe oghere anya ndị dị nro dịkwa mfe iyi..Ya mere, a na-etinye ihe quartz n'elu oghere elektrọnik n'okpuru ọnọdụ agụụ iji mepụta ihe nkiri na-eguzogide ọgwụ siri ike.. Agbanyeghị, n'ihi enweghị nkwekọrịta dị n'etiti ọnụọgụ mgbasa ya na -ekpo ọkụ na ihe ndabere, ọ dị mfe ịpụ apụ na fim ahụ adịghị emebi emebi, ya mere ọ na -eguzogide mmetụta na -eyi ihe na -adịghị mma.
2) Ọgbọ nke abụọ teknụzụ mgbochi ihe nkiri na-eyi
Mgbe 1980s, ndị nchọpụta achọpụtala na usoro eji eyi abụghị naanị ihe siri ike. Ihe nkiri ahụ nwere njirimara abụọ “ekweghị ekwe/nrụrụ”, ya bu, ụfọdụ ihe nwere ekweghị ekwe dị elu mana ha anaghị enwe nrụrụ, na ụfọdụ ihe isi ike adịghị ala, mana nrụrụ aka buru ibu. Ọgbọ nke abụọ nke teknụzụ ihe na-eyi ihe mgbochi bụ iji efere ihe siri ike ma ọ dịghị mfe ịgbawa n'elu oghere elektrọnik site na nmikpu..
3) Ọgbọ nke atọ nke teknụzụ na-eyi ihe mgbochi
E mepụtara teknụzụ ịse ihe nkiri nke ọgbọ nke atọ mgbe afọ 1990 gasịrị, tumadi iji dozie nsogbu nke iguzogide mgbochi mgbe ejiri oghere ihe nkiri kpuchie oghere elektrọnik .. Ebe ọ bụ na isi ike nke oghere oghere organic na isi ike nke mkpuchi mgbochi na-eche echiche dị nnọọ iche., ozizi ọhụrụ kwenyere na ekwesịrị inwe mkpuchi mgbochi n'etiti abụọ ahụ, nke mere na oghere ahụ nwere ike rụọ ọrụ dị ka ihe na -echekwa mgbe ntụpọ na -ete ya. Ihe isi ike nke ihe nkiri na-eyi ihe mgbochi nke ọgbọ nke atọ dị n'etiti ekweghị ekwe nke ihe nkiri na-eche echiche na ntọala oghere., na ọnụọgụ esemokwu ya dị ala, ọ dịghịkwa mfe ịdị na -agbaji.
4) Ọgbọ nke anọ teknụzụ mgbochi ihe nkiri na-eyi
Teknụzụ mgbochi ihe nkiri nke ọgbọ nke anọ na-eji mkpụrụ osisi sịlịkọn. Ọmụmaatụ, Mmiri siri ike nke TITUS nke French Essilor nwere matriks organic na irighiri ihe na-adịghị ahụkebe gụnyere silicon iji mee ihe nkiri na-eyi ihe ka mma ka ọ na-adị ike., ya bu, a na -emikpu oghere n'ime mmiri na -ekwesi ike ka emechara ọtụtụ nhicha, wee bulie ya n'ogo ụfọdụ ka oge ụfọdụ gachara..Ọsọ a metụtara viscosity nke mmiri siri ike ma na-arụ ọrụ dị mkpa na ọkpụrụkpụ nke ihe nkiri mgbochi .., polymerize na oven n'ihe dị ka 100 ° C maka 4-5 awa, na ọkpụrụkpụ nke mkpuchi bụ ihe 3-5 microns.
(2) Ụzọ nnwale
Ụzọ kachasị mkpa iji kpee ikpe ma nwalee nguzogide nke ihe nkiri na-eyi mgbochi bụ iji ya na ụlọ ọgwụ, ka onye na -eyi ya yie oghere ruo oge ụfọdụ, wee lelee ma tulee iyi nke oghere na mikroskopu. N'ezie, nke a na -abụkarị ụzọ eji tupu nkwalite teknụzụ ọhụrụ a. Ugbu a, ụzọ ule ọsọ ọsọ na nke kensinammuo anyị na -ejikarị bụ:
1) Nnwale na -ajụ oyi
Debe oghere n'ime ihe nkwado nke juru na gravel (a kapịrị ọnụ ọka na isi ike nke gravel ahụ), ma na -aga n'ihu ma na -aga n'ihu n'okpuru njikwa ụfọdụ. Mgbe ngwụcha, jiri igwe na -ekpo ọkụ iji nwalee ọnụọgụ mgbasa nke oghere n'ihu na mgbe esemokwu gachara, ma jiri ya tụnyere oghere ọkọlọtọ.
2) Nnwale ajị anụ nchara
Jiri ajị anụ a kapịrị ọnụ ete ete elu oghere ruo ọtụtụ ugboro n'okpuru nrụgide na ọsọ ụfọdụ, wee jiri igwe na -ekpo ọkụ nwalee ọnụọgụ mgbasa nke oghere n'ihu na mgbe esemokwu gachara, ma tulee ya na oghere ọkọlọtọ. N'ezie, anyị nwekwara ike iji aka mee ya, tee anya m abụọ ahụ otu ugboro ka ọ na -enwe otu nrụgide, wee lelee ma tulee ya na anya gba ọtọ..
Nsonaazụ nke ụzọ nnwale abụọ dị n'elu dị nso na nsonaazụ ụlọ ọgwụ nke onye na-eyi ogologo oge na-eyi.
3) Mmekọrịta dị n'etiti ihe nkiri na-emegharị emegharị na ihe nkiri na-eyi uwe
Ihe mkpuchi mgbochi na-adị n'elu oghere bụ ihe dị oke nchara nke na-adịghị ahụkebe (ọkpụrụkpụ na -erughị 1 micron), Mgbe ọ na -ete ya na oghere enyo, ebe ọ bụ na ntọala ahụ siri ike nke ukwuu, a na -apịakwa grit na ya, oyi akwa ihe nkiri ahụ siri ike ịcha; mana mgbe a na-ete ihe nkiri na-emegide ntụgharị na oghere organic, n'ihi na ntọala dị nro, isi ihe dị na fim ahụ. Achacha na oyi akwa, a na -apịa ihe nkiri ahụ ngwa ngwa.
Ya mere, a ga-ejiriri oghere elektrọnik na mkpuchi mgbochi tupu mkpuchi ntụgharị uche, ịdị ike nke ihe mkpuchi abụọ ahụ ga -adakọrịrị..
2. Ihe nkiri na-emegide echiche
(1) Kedu ihe kpatara anyị ji achọ mkpuchi mkpuchi?
1) Ntụgharị uche pụrụ iche
Mgbe ọkụ na -agafe n'ihu na azụ nke oghere, ọbụghị naanị na a ga -atụgharị ya, mana a ga -egosikwa ya..Idị a na -enwu enwu enwupụta n'ihu oghere ga -eme ka ndị ọzọ hụ anya onye nwe ya, mana ha ga -ahụ ọkụ na -acha ọcha n'elu oghere..Mgbe ị na -ese foto, ụdị ntụgharị uche a ga -emetụtakwa ọdịdị nke onye nwe ya.
Echiche nlele nke ihe nkiri na -ekwere na ike na -atụgharị uche nke oghere nlele ga -eme ka ihe a na -ele anya bụrụ onyo doro anya na tere aka nke onye na -eyi ya.. Enwekwara ike ịkọwa ya ka ọkụ nke ihe a na -elegharị anya na -agbagharị site na oghere wee gbakọta na retina ka ọ bụrụ isi ihe onyonyo..Ma agbanyeghị, n'ihi na mgbagho ihu nke ihu na azụ nke oghere Refractive dị iche, na enwere oke ọkụ na -egosipụta, a ga-enwe ọkụ na-atụgharị uche n'etiti ha., ya bu, ihe onyonyo mebere nso ebe onyonyo nke retina Ihe onyonyo a mebere ga -emetụta ido anya na nkasi obi nke ọhụụ.
Dị ka sistemụ anya niile, anya adighi mma. Ihe onyonyo etinyere na retina abụghị isi ihe, mana okirikiri na -adịghị mma..Ya mere, mmetụta nke isi ihe abụọ dị n'akụkụ na -emepụta site na juxtaposed karịa ma ọ bụ obere okirikiri na -agbagharị agbagharị., onyonyo dị na retina ga -ewepụta mmetụta nke isi abụọ, ma ọ bụrụ na isi ihe abụọ dị oke nso, okirikiri abụọ nwere ajị ajị ga -agbakọta ọnụ wee hie ụzọ maka otu isi.
Enwere ike iji ntụnyere gosipụta ọnọdụ a ma gosipụta ngosipụta nke ọhụụ Ọdịiche dị iche ga -abụrịrị karịa otu uru (oke nghọta, dakọtara 1-2) iji hụ na anya nwere ike ịmata ihe abụọ dị n'akụkụ.
Usoro ngụkọta oge nke iche bụ: D =(pụọ)/(a+b)
Ebe C bụ ihe dị iche, ọnụ ahịa kachasi elu nke mmetụta nke ihe abụọ dị n'akụkụ anya ya sere bụ a, na ọnụ ala kacha nta nke akụkụ dị n'akụkụ bụ b. Ọdịdị C dị elu karịa, nke ka elu nke usoro ihe a na -ahụ anya na isi ihe abụọ ma dokwuo anya nghọta; ọ bụrụ na isi ihe abụọ ahụ dị ezigbo nso, ọnụ ala kacha ala nke akụkụ ha dị nso na ọnụ ahịa kacha elu, mgbe ahụ ọnụ ahịa C dị ala , Na -egosi na sistem a na -ahụ anya adịghị edo anya maka isi ihe abụọ ahụ, ma ọ bụ enweghị ike ịkọwapụta nke ọma.
Ka anyị mee ụdị ihe ahụ: n'abalị, ọkwọ ụgbọala nwere iko na -ahụ nke ọma ịnyịnya ígwè abụọ ka ha na -agbada n'ụgbọ ala ya n'ebe dị anya .. N'oge a, nnukwu ọkụ ihu ụgbọ ala ahụ na -echegharị ihu n'azụ oghere onye ọkwọ ụgbọ ala: onyogho a kpụrụ site n'ìhè enwetara na retina na -abawanye ike nke isi ihe abụọ a hụrụ (ọkụ igwe).Ya mere, ogologo nke ngalaba a na b na -abawanye, ọ bụrụgodị na denominator (a+b) na -abawanye, mana ọnụọgụ (pụọ) na -anọgide otu, nke na -ebute mbelata ọnụ ahịa C. Nsonaazụ nke mbelata dị ala ga -eme ka mmetụta onye ọkwọ ụgbọ ala nke mbụ nke ọnụnọ ndị na -agba ịnyịnya abụọ banyeghachi n'otu foto., dị nnọọ ka a na -ebelata akụkụ nke ịmata ha na mberede.!
Onu ogugu ọkụ gosipụtara n'ìhè merenụ na -adabere na ntughari ntụgharị nke ihe oghere, nke enwere ike gbakọọ site na usoro nke ego ntụgharị uche.
Reflectance usoro: R =(n-1) akụkụ anọ/(n+1) akụkụ anọ
R: ntụgharị ihu otu akụkụ nke oghere n: ntughari uche nke ihe oghere
Ọmụmaatụ, ntughari ntụgharị nke ihe resin nkịtị bụ 1.50, gosipụtara ìhè R = (1.50-1) akụkụ anọ/(1.50 + 1) Oghere = 0.04 = 4%.
Lens nwere ihu abụọ. Ọ bụrụ na R1 bụ ọnụọgụ ihu ihu nke oghere na R2 bụ ọnụọgụ ntụgharị na azụ azụ nke oghere, mgbe ngụkọta ego nke oghere bụ R = R1+R2.(Mgbe ị na -agbakọ ntụgharị nke R2, ọkụ ihe mere bụ 100%-R1).Ntughari nke oghere T = 100%-R1-R2.
Enwere ike ịhụ na ọ bụrụ na oghere ntụpọ refractive dị elu enweghị mkpuchi mkpuchi, ìhè a na -enwupụta ga -ewetara onye nwe ya ahụ erughị ala..
Ihe mkpuchi mgbochi na-adabere na ọkụ ọkụ na ihe ndabichi., njupụta nke ebili mmiri ọkụ ga -abawanye; ma ọ bụrụ na ebili mmiri ọkụ abụọ sitere n'otu mmalite, ogologo ebili mmiri dị iche iche, ma ọ bụrụ na ebili mmiri ọkụ abụọ ahụ karịrị, ha na-akagbu onwe ha..ihe nkiri na-emegide echiche na-eji ụkpụrụ a were ihe nkiri na-emegide echiche kpuchie elu oghere., nke mere na ìhè na -enwupụta nke emepụtara n'ihu na azụ ihe nkiri a na -emetụta ibe ha, si otú a na-akagbu ọkụ na-enwupụta ma nweta mmetụta nke mgbochi echiche..
1) Ọnọdụ njupụta
Ntughari ntụgharị nke ihe onyonyo a ga -aharịrị na okirikiri okirikiri nke ntughari ntụgharị nke ihe anya oghere.
2) Ọnọdụ oge
Ọkpụrụkpụ nke ihe nkiri ahụ kwesịrị ịdị 1/4 wavelength nke akwụkwọ ntụaka. Mgbe d = λ/4 λ = 555nm, d = 555/4 = 139nm
Maka mkpuchi mgbochi mgbochi, ọtụtụ ndị na -emepụta oghere nlegharị anya na -eji ebili mmiri ọkụ (ogologo ogologo nke 555 nm) Nke ahụ na -emetụtakarị anya mmadụ. Mgbe ọkpụrụkpụ mkpuchi ahụ dị oke mkpa (<139nm), ìhè a na -enwupụta ga -apụta dị ka odo odo, ọ bụrụ na ọ bụ acha anụnụ anụnụ, ọ pụtara na ọkpụrụkpụ mkpuchi dị oke oke (>139nm).
Ebumnuche nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi bụ iji belata nchapụta nke ọkụ, mana ọ gaghị ekwe omume ị nweta ngosipụta nke ìhè. A ga -enwe agba fọdụrụ mgbe niile n'elu oghere, mana nke bụ ụcha kacha mma, n'ezie, enweghị ọkọlọtọ. Ugbu a, ọ dabere na mmasị onwe onye maka ụcha, na ọtụtụ n'ime ya bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ..
Anyị ga -achọpụtakwa na curvatures dị iche iche nke agba fọdụrụ na convex na oghere concave nke oghere na -emekwa ka mkpuchi mkpuchi dị iche., ya mere akụkụ etiti nke oghere bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akụkụ akụkụ ya bụ lavender ma ọ bụ agba ndị ọzọ..
3) Teknụzụ mkpuchi mgbochi
Nkpuchi oghere ihe ọkụkụ siri ike karịa oghere enyo. Ihe iko nwere ike iguzogide oke okpomọkụ dị n'elu 300 ° C, mgbe oghere organic ga -acha odo odo mgbe ọ gafere 100 ° C wee mebie ngwa ngwa.
Magnesium fluoride (MGF2) a na-ejikarị ya dị ka ihe mkpuchi mkpuchi maka enyo enyo. Agbanyeghị, a ga -emerịrị usoro mkpuchi nke magnesium fluoride na okpomoku dị elu karịa 200 Celsius, ma ọ bụghị ya enweghị ike ịgbakwunye ya n'elu oghere, ya mere lensị anya anaghị eji ya.
Kemgbe 1990s, na mmepe nke teknụzụ mkpuchi agụụ, ojiji nke teknụzụ bọmbụ ion beam emeela ngwakọta nke ihe nkiri na oghere, na nchikota ihe onyonyo ka emeziwanye .. Ọzọkwa, enwere ike idobe ihe dị ọcha dị ọcha dị ọcha dị ka titanium oxide na zirconium oxide n'elu oghere resin ahụ site na usoro uzuoku iji nweta ezigbo mmetụta ntụgharị..
Ihe na-esonụ bụ mmeghe nke teknụzụ mkpuchi mgbochi nke oghere anya.
1) Nkwadebe tupu mkpuchi
A ga-asachapụrịrị oghere ahụ tupu ịnata mkpuchi. Achọrọ nhicha dị oke elu, na -eru ọkwa molekụla .. Tinye mmiri dị iche iche nhicha na tank nhicha, ma jiri ultrasonic kwalite mmetụta nhicha. Mgbe emechara oghere, tinye ya n'ime oghere oghere. N'oge usoro a, tinye nlebara anya pụrụ iche iji zere uzuzu na ihe mkpofu na ikuku site n'ịrapara n'elu oghere..Ndị nhicha ikpeazụ dị n'ime ụlọ oghere. N'oge usoro a, ekwesịrị ịkpachapụ anya nke ọma iji zere uzuzu na ihe mkpofu ikuku ka ọ ghara ịrapara n'elu oghere..A na -eme nhicha ikpeazụ tupu etinye n'ime oghere oghere.. Gun egbe egbe etinyere n'ime oghere oghere ga -agbaba n'elu oghere (ọmụmaatụ, na argon ion). Mgbe emechara usoro nhicha a, a ga-eme mkpuchi nke ihe nkiri na-eche echiche..
2) Mkpuchi mkpuchi
Usoro uzu oku nwere ike hụ na etinyere ihe mkpuchi dị ọcha n'elu oghere, na n'otu oge ahụ, ihe mejupụtara kemịkal nke ihe mkpuchi nwere ike ịchịkwa ya nke ọma n'oge usoro uzuoku .. Usoro mmịcha agụụ nwere ike ijikwa oke ọkpụrụkpụ ihe nkiri ahụ n'ụzọ ziri ezi., na izi ezi dị na ya.
3) Ịkwado ihe nkiri
Maka anya lenses, ike nke ihe nkiri ahụ dị ezigbo mkpa, Ọ bụkwa akara ngosi dị mkpa nke oghere.Ngosipụta ogo nke oghere gụnyere oghere mgbochi oghere, ihe ngosi nka omenala, mgbochi okpomọkụ, wdg..Ya mere, enwere ọtụtụ ụzọ nyocha anụ ahụ na kemịkal ezubere iche. N'okpuru ọnọdụ simulating iji onye nwe ya, a na -anwale ịdị ngwa ngwa ihe nkiri nke oghere mkpuchi .Ụzọ ule ndị a gụnyere: nnwale mmiri nnu, uzuoku ule, ule mmiri deionized, nnwale esemokwu ajị anụ, ule nkwụsị, nnwale adhesion, ule nnwale okpomọkụ na ule iru mmiri, wdg.
3. Ihe nkiri na-emegide ihe (ihe nkiri kacha elu)
Mgbe elu nke oghere na-kpuchie na multi-oyi mgbochi mgbochi echiche film, oghere na -adịkarị mfe nsị, na ntụpọ ga-ebibi mmetụta mgbochi mgbochi nke ihe nkiri mgbochi. N'okpuru microscope, anyị nwere ike ịhụ na mkpuchi mgbochi na-eme mkpọtụ nwere usoro adịghị mma, ya mere ntụpọ mmanụ dị mfe ịbanye n'ime mkpuchi na-echebe ihe ngwọta., na ihe nkiri a ga-adịrịrịrịrị nke ukwuu nke na ọ gaghị agbanwe ngwa anya nke ihe nkiri na-emegide ngosi.
Ihe nkiri antifouling bụ tumadi fluoride, na enwere ụzọ nhazi abụọ, otu bụ usoro imikpu, nke ọzọ bụ mkpuchi mkpuchi, na usoro a na-ejikarị bụ mkpuchi mkpuchi, usoro a na-ejikarị bụ mkpuchi mkpuchi., Enwere ike itinye ihe nkiri fluoride na ihe nkiri na-atụgharị uche site na iji usoro uzucha., ma nwee ike belata oghere kọntaktị mmiri na mmanụ nwere oghere, nke mere na ntụpọ mmanụ na mmiri adịghị mfe ịrapara n'elu oghere, ya mere a na -akpọkwa ya ihe nkiri na -egbochi mmiri.
Maka oghere anya organic, ezigbo ọgwụgwọ usoro elu kwesịrị ịbụ ihe nkiri mejupụtara yana ihe nkiri na-eyi mgbochi, ihe nkiri mgbochi na-emegharị ọtụtụ ihe nkiri na ihe nkiri na-emegide ihe nkiri. Ọtụtụ mgbe mkpuchi ihe nkiri na-eyi akwa bụ nke kacha, ihe dịka 3-5 mm, na ọkpụrụkpụ nke ihe nkiri na-emegide ntụgharị ihe dị ihe dị ka 0.3um, mkpuchi mkpuchi kpụ ọkụ n'ọnụ nke dị gịrịgịrị n'elu akwa oyi akwa, Ihe dịka 0.005-0.01mm Were Crizal French Essilor, mejupụtara film dị ka ihe atụ, a na-ebu ụzọ kpuchie ihe mkpuchi anya na ihe nkiri na-eguzogide na silicon organic; mgbe ahụ na -eji teknụzụ IPC, a na-etinye ihe nkiri na-emegharị emegharị site na bọmbụ ion Tupu nhicha; mgbe nhichachara, jiri zirconium dioxide siri ike (ZrO2) na ihe ndị ọzọ maka mkpuchi mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi ọtụtụ ihe; n'ikpeazụ, efere ihe nkiri dị n'elu nwere akụkụ kọntaktị nke 110. Mmepe nke ọma nke teknụzụ ihe nkiri mejupụtara kristal na -egosi na teknụzụ ọgwụgwọ elu nke oghere ihe ọkụkụ erutela ọkwa ọhụrụ..
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka ule ọkpụrụkpụ ihe nkiri, ihe dị iche n'etiti mkpuchi mkpuchi na mkpuchi anya bụ:
1. Mkpuchi mkpuchi: N'ozuzu TiN, KRN, TiC, Zrn, ọkpụrụkpụ nke electroplating bụ ihe dịka 3 ~ 5 microns.Gụkọta, Enweghị ike nwalee ọkpụrụkpụ ihe mkpuchi mkpuchi agụụ na akụrụngwa;
2. Enwere ike itinye ule ọkpụrụkpụ ihe nkiri nke mkpuchi anya na elu igwe mkpuchi ya na onye na -enyocha ọkpụrụkpụ ihe nkiri..
Nke mbụ bụ ule njikwa ọkụ, na ugbu a njikwa kristal (oscillator kristal) a na -ejikarị eme ihe iji nwalee ọkpụrụkpụ mkpuchi ahụ site n'iji ugboro oscillator kristal .. Oke ihe nkiri dị iche iche dị iche.
Ọbụna ma ọ bụrụ na a na -emepụta igwe mkpuchi na China, a na -emekwa onye na -enyocha ọkpụrụkpụ ihe nkiri na United States ma ọ bụ South Korea..Ihe nlereanya GM USA bụ: MDC360C.
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Ụkpụrụ nke magnetron sputtering sputtering zaa
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Inye ihe ITO lekwasịrị anya bụ na Japan